အမေရိကန်အလုပ်သမားဈေးကွက်အခြေအနေဒေတာကို လစဉ်လတိုင်း ထိုလ၏ ပထမဆုံးသောသောကြာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ပေးလေ့ရှိပါသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇွန်လတွင်လည်း ယခင်အတိုင်း ပထမဆုံးသော သောကြာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။.
NFPဒေတာနှင့်အတူ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း ဒေတာနှင့် နာရီအလိုက် လုပ်ခလစာဒေတာများကိုပါ ဇွန်လ ၂ရက်နေ့ ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ဧပြီလကထုတ်ပ်ြခဲ့သည့်ဒေတာများကတော့ မျှော်မျန်းထားသည်ထက် အားကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။.
ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့်လည်း ငွေကြေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲရန် အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရန် ယခုစီးပွားရေးဒေတာအခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိပါသည်။ ဇွန်လ၁၄ရက်နေ့ ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲတင် အတိုးနှုန်းကိစ္စကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ NFP ဒေတာကိန်းဂဏန်းများကောင်းမွန်ပါက စီးပွားရေးအခြေအနေကျတက်လာတယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပြီး ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် အတိုးနှုန်းတင်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြေများသောကြောင့် အမေရိကန်ငွေကြေး ဒေါ်လာ တန်ဖိုးမြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။.